(၁၉၁၀ မှ ၁၉၃၀ ထိ)
(၁၉၄၈ မှ ၁၉၅၂ ထိ)
မဟာသရေစည်သူ ဦးစိန် (ပါလီမန်အတွင်း၀န်) (၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၀ ထိ)
(၁၉၅၂ မှ ၁၉၆၂ ထိ)
(၁၉၅၆ မှ ၁၉၆၀ ထိ)
(၁၉၆၂ မှ ၁၉၇၄ ထိ)
(၁၉၇၄ မှ ၁၉၈၈ ထိ)
(၁၉၈၈ မှ ၁၆.၄.၁၉၉၆ ထိ)
(၂၃.၄.၁၉၉၆ မှ ၁၆.၄.၁၉၉၈ ထိ)
ဗိုလ်မှူးကြီး လှသောင်းမြင့် ( ၁၉.၄.၁၉၉၈ မှ ၁၇.၁၂.၁၉၉၈ ထိ)
ဗိုလ်မှူးချုပ် မြင့်သိန်း ( ၁၇.၁၂.၁၉၉၈ မှ ၂၃.၈.၁၉၉၉ ထိ)
ဗိုလ်မှူးချုပ် ညွှန့်လှိုင် ( ၂၃.၈.၁၉၉၉ မှ ၁၄.၆.၂၀၀၂ ထိ)
ဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းဆွေ (၁၅.၆.၂၀၀၂ မှ ၃၀.၉.၂၀၀၃ ထိ)
( ၁.၁၀.၂၀၀၃ မှ ၁၃. ၉. ၂၀၀၄ ထိ)
ဗိုလ်မှူးချုပ် လှမြင့်ရွှေ (၈.၅.၂၀၀၅ မှ ၁၈.၈.၂၀၀၆ ထိ)
ဗိုလ်မှူးချုပ် ညွှန့်တင် (၁၈.၈.၂၀၀၆ မှ ၂၂.၆.၂၀၀၈ ထိ)
ဗိုလ်မှူးချုပ် ၀င်းမြင့် (၂၃.၆.၂၀၀၈ မှ ၃၀.၃. ၂၀၁၁ ထိ)
(၃၁.၃.၂၀၁၁ မှ ၃၀.၃. ၂၀၁၆ ထိ)
(၃၁.၃.၂၀၁၆ မှ ယနေ့ ထိ)
မဲဆန္ဒနယ် ရှားတောမြို့နယ် အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ထမ်းဆောင်သည့်တာဝန် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ
အခြေခံပညာကို အမှတ်(၇)မူလတန်းကျောင်း၊ အလက(၁)၊ အထက(၁)တို့တွင် သင်ယူခဲ့ပါ သည်။
တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်ကို လှိုင်တက္ကသိုလ်၊ တတိယနှစ်နှင့် စတုတ္ထနှစ်ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တို့တွင် စာပေးစာယူကျောင်းသားဘဝဖြင့် သင်ယူခဲ့ရာ(၁၉၈၇)ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)ရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ရှားတောမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကင်းစင်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရှားတော မြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဆိုင်းဘုတ်များ ပြန်လည်တင်ခဲ့ပြီး သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး တာဝန်ယူ၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ရှားတောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါသည်။